Shan Musharax oo ka qeybgalaya doorashooyinka madaxtinimo ee Aljeria – Radio Muqdisho
Mas’uuliyiinta doorashada Algeria ayaa sheegay in doorashada madaxtinimada ee ka dhaceysa dalkaasi bisha soo socota ay ku tartami doonaan shan murashax oo inta badan ah madax horay xilal uga soo qabtay dowladdii hore.
Dadka tartamaya ayaa kala ah Ra’isulwasaarihi hore Abdelmadjid Tebboune , Ali Benflis, wasiirkii hore ee dhaqanka Azzedddine Mihoubi, wasiirkii hore ee Dalxiiska Abdelkader Bengrine iyo Abdelaziz Belaid, oo ah madaxa xisbiga ugu dhaqdhaqaaqa El Mostakbal.
Dadka reer Aljeeriya ayaa 12-ka bisha Disembar u dareerti doona goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimo ee dalka ,inkastoo ay jiraan mudaaharaadyo weli ka socda gudaha dalka Aljeria.
Musharixiinta tartamaya qeyb ahaan waa kuwii ay ka dhasheeb rabsadaa socda mudada dheer ee lagu diidan yahay in ay soo noqdaan xubnaha dowladdii hore ee dalka Aljeeriya.
Ilaa 23 musharax ayaa isdiiwaaangeliyay inkastoo la ogolaaday ama liiska ay ku soo baxeen shan kaliya sida laga soo xigtay madaxa gudigga doorashooyinka Mr Chorfi.